आज फेला परेका संक्रमित १० जना लकडाउनमा यसरी भारतबाट नेपाल छिरेका थिए ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/आज फेला परेका संक्रमित १० जना लकडाउनमा यसरी भारतबाट नेपाल छिरेका थिए !
आज फेला परेका संक्रमित १० जना लकडाउनमा यसरी भारतबाट नेपाल छिरेका थिए !
काठमाडौ । आज भेटिएका कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित भारतबाट लकडाउनमा नेपाल छिरेको खुलेको छ। कपिलवस्तुमा भेटिएका दश जना नयाँ संक्रमित पनि भारतबाटै लुकिछिपी नेपाल भित्रिएको पाइएको छ। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले उनीहरु भारतबाट नेपाल भित्रिएको बताए।
उनकाअनुसार भारतको मुम्बई, दिल्लीलगायतका ठाउँबाट आएका थिए। तर उनीहरु कहिले नेपाल भित्रिए भन्ने बारे सही जानकारी पत्ता लगाउन बाँकी रहेको पौडेलले बताए। संक्रमण फेला परेका ब्यक्तिहरु कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकास्थित अनिरुद्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा रहेका क्यारेन्टाईनमा बसेका थिए । संक्रमितहरुलाई बुटवलस्थित कोरोना बिशेष अस्थायी अस्पतालमा ल्याउने तयारी भएको छ।
यसअघि कपिलवस्तुमै फेला परेका संक्रमितहरु पनि दुवै देशमा लकडाउन जारी रहेकै बेला भारतबाटै लुकिछिपी नेपाल भित्रिएका थिए। अघिल्ला संक्रमित र नयाँ संक्रमितहरुबीच सम्बन्ध र सम्पर्कबारे पनि पत्ता लाग्न बाँकी रहेको प्रजिअ पौडेलले बताए। नयाँ संक्रमितसँगै कपिलबस्तुमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या १५ पुगेको छ।